डिभी परेका २ हजार नेपाली अमेरिका जान नपाउने !
काठमाडौं, ४ साउन । गतवर्ष डिभी परेका २५ सय ७८ जना नेपालीहरु अमेरिका आउन नपाएकोमा चालु आर्थिक वर्षका लागि डिभी परेका झण्डै २ हजार नेपाली अमेरिका जान नपाउने भएका छन् ।
अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष ( सन् २०१४ को अक्टोबरदेखि सन् २०१५को सेप्टेम्बरसम्म ) का लागि ७ हजार १ सय ५० भन्दा माथि केसनम्बर हुने नेपाली डिभी लोटरी विजेताहरु अमेरिका आउन नपाउने घोषणा गरेपछि डिभी विजेता झण्डै २ हजार नेपालीहरुले अमेरिका आउने आशा मार्नुपरेको अमेरिकाबाट प्रकाशित अनलाइन खसोखासमा खबर छ । अब उनीहरु अरु सबै योग्यता पूरा गर्दा गर्दै पनि अमेरिका आउन नपाउने भएका छन् ।
किशोर पन्थीको बाइलाईनमा प्रकाशित समाचारमा अघिलेखिएको छ,
सेप्टेम्बर महिनाका लागि जारी गरिएको डिभी लोटरी भिसाको कोटामा नेपालीहरुलाई ७ हजार १ सय ५० केसनम्बरसम्म सिमित गरिएको छ भने अगस्त महिनाका लागि पनि ७ हजार १ सय ५० सम्मकै केसनम्बर तोकिएको थियो । अगस्त महिनाका लागि डिभी लोटरी भिसाको कोटामा नेपालीहरुलाई ७ हजार १ सय ५० सम्मको केस नम्बरमा सिमित गरिदा डिभी विजेता धेरैले सेप्टेम्बरका लागि केस नम्बर थपिने आशा गरेका थिए । तर अब त्यो आशा पूर्णरुपमा समाप्त भएको छ । जुलाई महिनाका लागि भने डिभी विजेता नेपालीहरुलाई केस नम्बर ६ हजार ४ सय ७५ मा सिमित गरिएको थियो ।
नेपालीहरुलाई जुलाईदेखि सिमाबन्दी लगाउन सुरु गरिएको हो । त्यसअगाडि जुन महिनाका लागि सबै एसियाका लागि ५ हजार ९ सय ५० सम्मको केस नम्बर भएका डिभी विजेताहरुले भिसाका लागि आवेदन दिनसक्ने तोकिएपनि नेपालका लागि छुट्टै सिमाबन्दी लगाइएको थिएन । अहिले भने एसियाका अन्य मुलुकका ७ हजार ६ सय ५० सम्म केस नम्बर हुने डिभी विजेताहरुले भिसाका लागि आवेदन दिन सक्ने भएपनि नेपालका लागि भने केस नम्बर ७ हजार १ सय ५० मा सिमित गरिएको हो ।
गतवर्ष अमेरिकाले ९ हजार ५ सयसम्म केस नम्बर हुने डिभी विजेता नेपालीहरुलाई भिसा आवेदनका लागि योग्य ठानेकोमा यो वर्ष केसनम्बर अझ खुम्चाइएको छ । एउटा देशबाट ७ प्रतिशत अर्थात् ३५ सयको हाराहारीमामात्र डिभी लोटरी विजेताहरु अमेरिका आउन पाउने भएकाले गतवर्ष डिभी लोटरी पार्न सफल ४ हजार ९ सय ९१ जनामध्ये कम्तीमा २ हजार नेपालीहरु अमेरिका आउन नपाउने निश्चित छ । त्यस्तै गत मे महिनामा सन् २०१६ को डिभी लोटरी पार्न सफल ३ हजार ८ सय १ नेपालीहरु मध्ये पनि कम्तीमा ३ सय नेपालीहरु अमेरिका आउन नपाउने निश्चित छ ।
डिभी पर्दैमा अमेरिका आउन पाइन्न
चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ हजार ९ सय ९१ जना नेपालीहरुलाई अमेरिकाको डिभी लोटरी परेको थियो । सन् २०१४ को मे महिनामा आएको नतिजा अनुशार यो संख्यामा नेपालीहरुलाई डिभी लोटरी परेको हो । अमेरिकाले डिभी लोटरीबाट एक देशबाट हरेकवर्ष ३५ सयको हाराहारीमा मात्र विजेताहरुलाई भिसा दिने गरेकाले डिभी लोटरीको परिणाम आउँदा नै डिभी लोटरी परेका सबैजना अमेरिका आउन नपाउने निश्चित थियो । किनभने डिभी लोटरीको नियममा नै अमेरिकाले कुल संख्या झण्डै ५० हजारको ७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र एउटा देशका लागि डाइभर्सिटी भिसा नम्बर दिने स्पष्ट पारेको छ । जस अनुशार अहिलेसम्म कुनै पनि देशले ३५ सयदेखि ३८ भन्दामाथि डाइभर्सिटी भिसा पाएको रेकर्ड छैन । त्यसैले नेपालले पनि ३५ सयको हाराहारीमा भन्दा बढी संख्यामा डाइभर्सिटी भिसा नपाउने निश्चित थियो । जस अनुशार कम्तीमा २ हजार नेपालीहरु अमेरिका आउन नपाउने निश्चित थियो । तर पनि नेपालीहरुले अमेरिका आउन पाउने आशाको त्यान्द्रो भने छाडेका थिएनन् ।
यसैसाता अमेरिकाले ७ हजार १ सय ५० भन्दा माथि केस नम्बर हुने डिभी लोटरी नेपाली विजेताहरुले अमेरिकाको भिसा नपाउने स्पष्ट पारिदियो । त्यसैले अब ७ हजार १ सय ५० भन्दा माथि केस नम्बर हुने डिभी लोटरी नेपाली विजेताहरुको डिभीमार्फत अमेरिका आउन पाउने ढोका पूर्णरुपमा बन्द भएको छ भने पढाई छोडेर, जागिर छोडेर र सम्पत्ति बेचेर अमेरिका आउने आशामा बसेका सयौं नेपालीको विचल्ली भएको छ । किनभने डिभी लोटरी परेको भन्दै कैयन नेपालीहरु अमेरिका आउनका लागि तयार भएका बसेका थिए । कैयनले आफ्नो पढाई छाडेर बसेका थिए भने कैयनले घरबार बेचेर बसेका थिए । कैयनले त छँदाखाँदाको जागिर छाडेर बसेका थिए ।
अहिलेसम्म ४४ हजार नेपालीलाई डिभी
मे महिनाको पहिलो साता गत वर्षको नोभेम्बरमा डिभी चिठ्ठा भरेकाहरुको पहिलो चरणको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै अहिलेसम्म डिभी चिठ्ठा पर्ने नेपालीहरुको संख्या ४० हजार नाघेको छ । सन् १९९९ देखि हालसम्म डिभी चिठ्ठाको फारम भरेका नेपालीहरुमध्ये ४० हजार भन्दा बढी नेपालीहरुलाई डिभी चिठ्ठा परेपछि उनीहरुका परिवारसहित अमेरिका आउनेहरुको संख्या यो भन्दा अझ बढी रहेको छ । तर कैयनले भिसा नम्बर उपलब्ध नभएका कारण वा अन्य कारणले अयोग्य ठहरिदा अमेरिका आउन पाएका छैनन् ।
त्यस्तै सन् २०१३ का लागि भरिएको डिभी चिठ्ठामा ४३७० नेपालीलाई यो चिठ्ठा परेको थियो भने सन् २०१४ का लागि भरिएको डिभी चिठ्ठामा ६ हजार ८२ नेपालीलाई यो चिठ्ठा परेको थियो । सन् २०१५ का लागि भरिएको डिभी चिठ्ठामा ४ हजार ९ सय ९१ जना छनौट भएका थिए भने सन् २०१६ का लागि भरिएको डिभी चिठ्ठामा ३८ सय १ जना नेपाली छनौट भएका थिए । उनीहरुको भिसा प्रकृया आगामी अक्टोबरबाट सुरु हुनेछ ।
अमेरिका घुमेर मैले के सिकेँ ?
– खसोखास डटकमबाट